Ammee! Salaaleettis ajjeechaa garaa nama nyaatu raawwatan – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAmmee! Salaaleettis ajjeechaa garaa nama nyaatu raawwatan
“Barataa Fayyisaa (Gaaddisaa) Nugusee Aagaa kan jedhamu godina shawaa kaabaa Aanaa Darba libaanosi ganda soneetti kan dhalate yoo ta’u, Abbaan isaa ji’a jahatti irraa du’ee Haati guddiste. gaafa caamsaa 03/09/2012 waraana mootummaa humna addaa poolisii oromiyaatiin magaala shararootti ganama sa’aatii 2;00 irratti reebamee. qaama isaa hunda caamadhaan irra deemudhaan kalee fi garaa isaa miidhan dhiiga isaa karaa irratti afaanii fi funyaanin yaasudhaan dhiigni isaa keessaa dhume ture jedhu namoonni ija isaaniin argan. Haati isaa Aadde Muluu maadaraa kan jedhaman harka qalleeyyii waan taniif waan ittin yaalchisan dhabuudhaan uumannii fi warri ollaa qarshii walitti qabuudhaan gaafa guyyaa 24/09/2012 hospitaala shararoo galuudhaan humnaa oli waan ta’eef gara hospitaala walii gala fiichetti gaafa guyyaa 24/09/2012 refarii godhamuudhan gaafa guyyaa 25/09/2012 hospitaalli fiichee finfinneetti refar gochaa osuma jiruu lubbuun isaa hospitaalichatti darbee jira. Gaafa guyyaa 27/09/2012 mana amantaa mika’elaa jedhamutti awwaalamee jira.
Waan garaa nama nyaatu keessaa mucaan hojii humnaa hojjetee maatii fi ofi jiraachisu humna mootummaatiin ajjeefamuun baayyee nama gaddisiisa.”
የተማሪ ፈይሳ ንጉሴ አጋ ይባላል።በሰሜን ሸዋ ደብረሊባኖስ ወረዳ ሶኔ ቀበሌ Ganda Sonee በምትባለው መንደር…
የዚህ ተማሪ ወላጅ አባት የሞተበት የስድስት አመት ህፃን እያለ ሲሆን በግንቦት 03/09/2012 በሻራሮ ከተማ ከጠዋቱ ሁለት ሰአት ላይ በመንግስት ሰራዊት አባላት መሀል ከተማ ላይ ተደብድቦ ደም በአፍና አፍንጫው እየፈሰሰ ሜዳ ላይ ጥለውት በመሄዳቸው እና ወላጅ እናቱ ማሳከሚያ ስለሌላት በማህበረሰቡ ርብርብ ገንዘብ በማዋጣት ሆስፒታል የወሰዱት ቢሆንም ማትረፍ ሳይቻል በ25/09/2012 ህይወቱ አልፋለች
Miila Qeerroo Oromoo muranii imala Qabsoo bilisummaa irraa dhaabuu barbaadan. Ishiin amma jirtu tun ishii waggaa 27 turte waliin miila nurraa muraa baate. Amma ammoo eega Nafxanyaatti hirkattee wagguma lama keessatti recordii gooftota ishii duraanii san cabsite. Bineensi Nafxanyaa lafaa ol ka’aa jiru yoo yeroodhaan ofirraa hin qaarsine yeroo gabaabduu keessatti Qeerroo Gaachana sabaa nyaatee abjuu Nafxanyaa dhugoomsuuf arreedaa jira. Nutis luka ishii jalatti dhoofnee cabsina malee abadan Oromiyaa irratti hin milkooftu!
Viidiyoo keessaan naa ergamte kan Abiy waa’ee afaan Oromoo afaan Federaalaa gochuu dhageeffadhe. Akkuma xiqqo irraa isiniif maxxanse gaafii kana deebifne jedhe. Heera keessa galchuu dhabuun hojicha nun dhoorku jedhe. Haasawa isaarraa wanti hubadhu waggaa 10-15 kan jedhu yaada isaati. Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa Federaalaa hin taane. Gaafiin kun hin deebine. Inni garuu deebifne jedhe. Suutuma suutaan kijibee miila gadi jabeeffachuuf hojjataa jira. Mee afaan Oromoo afaan Federaalaa yoom tahe? Afaan hojii OPDO kan tureyyuu amma afaan Amaaraatti dhimma bahaa jiru. Afaan paartiituu hin taane akkamitti kijiba guddaa hamma gahu kijiba MM biyya bulchu tokko. Nama ifatti kijibu maal jedhanii deebii kennu?